भुटानले जस्तो भोलि देश निकाला गर्यो भने दार्जेलिङ बासिहरु शरण लिन कता जानू हुन्छ ? भिडियो सहित - Enepalese.com
भुटानले जस्तो भोलि देश निकाला गर्यो भने दार्जेलिङ बासिहरु शरण लिन कता जानू हुन्छ ? भिडियो सहित
इनेप्लिज २०७४ असार १२ गते २:२१ मा प्रकाशित
दार्जिलिङको एक नेताको मुख बाट निस्किएको शब्दले नेपाल र नेपालीको ध्वजि उडेको छ। दार्जिलिङमा भाषाको विषय लाई लिएर आन्दोलन सुरु भएदेखि ३ जना मारिए। यसो भई रहदा नेपाल लगायत बिश्वको कुनै पनि कुनामा बस्ने नेपालीको मन दुख्नु स्वभाविक पनि हो।
त्यसैले सबै नेपालीले दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने नेपाली माथी भएको दमनको बिरोध र दार्जिलिङबासी प्रती सहानुभुती सद्भाव राखेकै हो, यो सद्भाव कुनै पनि दार्जिलिङको नेताले दार्जिलिङ लाई नेपालमा गाभ्देला भन्ने आसले गरेको हैन त्यो हामी कदापी गर्ने वाला पनि छैनौ, तर जसलाई हामी हाम्रा दाजुभाइ भनेर सपोर्ट गर्यौ उनिहरु बाटै सामाजिक संजालमा यस्ता गलत आरोप र गाली सुन्नु पर्दा हामी नेपाली गोर्खालीलाई मान्य भएन पाच्य भएन,आम नेपाली समुदाय ले समर्थनको साटो बिरोध जनाउन थाले, हामीले गल्ती गरेको महसुस भयो |